Chhaharaa | सिरिजङ्जा लिपी एक तथ्य एक जानकारी
सिरिजङ्जा लिपी एक तथ्य एक जानकारी
—युवराज लिम्बू वनेम
नेपालभित्र लिम्बु समाजमा सिरिजङगा सिं. थेबेको अमुल्य योगदानलाई उच्च कदर र सम्मान कसैले गरेको छ भने किरात याक्थुङ चुम्लुङ नै हो । तथ्यहरु भन्दछन् कि आफनो स्थापना काल २०४६ सालदेखि २०७८ सालसम्म निरन्तर ३३ वर्षसम्म जन्मजयन्ती मनाइरहेको छ । उनको पूर्ण कदको चित्र बनाई र जीवनीहरु पाठयपुस्तकमा समावेश गरी प्रचार गरिरहेको छ । उनको पूर्णकदको सालिक धरान तीनकुनेमा, ललितपुर चुम्लुङ हिम लगायत विभिन्न स्थानहरुमा प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपाली हुलाक टिकटमा प्रकाशनमा पहल गरेर, नेपालको मौलिक लिपिका सर्जक भएका हुनाले राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्दछ भनी आवाज उठाएर विविध पहल गरिरहेको छ । उनको नाममा २०५१ सालमा किरात सिरिजङगा पुरस्कार स्थापनादेखि निरन्तररुपमा भाषासहित्य क्षेत्रमा लाग्नुहुने व्यक्तिहरुलाई ‘किरात सिरिजङगा पुरस्कार’बाट पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यी तथ्यहरुमा धेरै छुटेका होलान् । यसरी उनीप्रति सच्चा सम्मान गर्नमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले आफनो कर्तव्य र दायित्व निरन्तर बहन गरिरहेको छ ।
सिरिजङगा सिं. थेबेलाई निरन्तर सम्मान गर्ने संस्थामाथि अपमानित गर्यो भनी विज्ञप्ति निकाल्ने युमा साम्यो महासभाको ‘कस्मेटिक’ सम्मान समयले चाडै उदाङ्गो पार्नेछ । हुनतः यो भरखरै जन्मेको संस्था हो, धेरै टिकाटिप्पणी अन्याय होला । तर उसको सुरुवात हेरौं त । महासभाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको शहर धरान तीनकुनेमा अवस्थित सिरिजङ्गा सालिकमा पुगेर सम्मान गरेको कुनै उसको औपचारिक पोष्ट वेभसाइटमा देखिन्न आजसम्म । सहकर्मी संस्थालाई नराम्रो देखाएर आफु राम्रो हुनखोज्ने गलत प्रवृत्तिका द्योतक युमा साम्यो महासभालाई म चुनौतीका साथ अपील गर्दछु कि तपाईहरु समाजमा काम गरेर देखाउने परीक्षण कालमा हुनुहुन्छ, आफै राम्रो काम गरेर आफुलाई प्रमाणित गर्नुहोस् ।
थपिएको व्यञ्जन र स्वर वर्णहरुको बारेमा लिपि सम्बन्धी अभ्यास, ज्ञान, पाठहरु हेर्न, बुझन र भाषा विज्ञहरुबाट परामर्श गर्न अनुरोध छ । अग्रज विक्रम सुब्बा दाइको पोष्ट हेर्दा पनि थाहा
लाग्छ । विज्ञप्तिमा उल्लेखित आरोप अप्राज्ञिक हर्कत बाहेक अन्य केही
महासभा परीक्षण कालमा छ । नाम हेर्दा, धार्मिक संस्थाको रुपमा देखापरेको छ । समाजमा काम गर्ने स्पेसहरु पनि प्रशस्त छन् । सो कुरा हामीले हेक्का राखेकाछौं र सकारात्मकरुपमा लिई कहिलै संस्थागत विरोधहरु गरेनौं । धार्मिक सन्दर्भमा आफूलाई खाटीरुपमा उतार्नुपर्नेमा, आफनो मूल कार्यक्षेत्र भन्दा फरक सन्दर्भहरुमा अर्को संस्थालाई आरोप लगाउनमा बल गरेको देख्दा यो संस्थाबाट समाजले के आशा राख्लान् ? विश्वास आर्जन गर्लान् ? राज्यसँग लडनुपर्नेमा सहयात्री संस्थासँग विरोध विज्ञप्ति जारी गरीबस्नेले समाजमा के योगदान
हुनतः महासभालाई भन्न मन लाग्छ कि धार्मिक क्षेत्रमा दर्ता भएकोले सोही क्षेत्रमा काम केन्द्रीत गर्नु श्रेयश्कर छ भनेर । तर कुनै पनि संस्था सृजनात्मक हुनसक्छ भनी विश्वास र अपेक्षा राख्यो, सहकर्मी संस्थालाई दुश्मन ठानी मात्र खोइरो खन्छ । संस्थाको अध्यक्ष जस्तो एक जिम्मेवार व्यक्तित्व र औपचारिक पदाशिन व्यक्तित्व भइकन पनि आफनो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न हुने नहुने पोष्टहरु छुटयाउन सक्दैन (व्यक्तिको फोटो क्रस गरेको लगायत) ? चुम्लुङलाई आलोचना गर्नलाई महासभाले दुःख गर्नुपर्दैन, चुम्लुङका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु काफी छन् । हो चुम्लुङले गर्न नसकेका कामहरु गर्नलाई ठाउँहरु खाली छन् ।
युमा साम्यो महासभा एक अर्को फरक दर्तावाल संस्था हो, किरात याक्थुङ चुम्लुङ अर्को फरक । निर्णय गर्ने, लागु गर्ने, सच्च्याउने प्रणालीहरु, दृष्टिकोणहरु आआफना हुन्छन् भन्ने महासभा सामान्य ज्ञान पनि राख्दैन कि ? संस्थागत र सांगठानिक अवस्थाहरु बुझन सबैमा अपील गर्दछु ।